Gweta muEindhoven | Law & More - Advocatenkantoor muEindhoven
Iwe uri muzvinabhizimusi kana wega wega akasangana nedambudziko repamutemo uye ungade kuti rigadziriswe? Ndapota taura Law & More, magweta edu anofara kukubatsira! At Law & More isu tinonzwisisa kuti, kunyangwe iwe uri muzvinabhizimusi kana wega wega, nyaya dzese dzepamutemo dzakawandisa uye kuti chero nyaya iri pamutemo inogona kukanganisa hupenyu hwako. Nekudaro, kusiyana nemakambani mazhinji emutemo, Law & More inokupa chimwe chinhu chakawedzera. Iko mafemu mazhinji emitemo chete ane ruzivo rweinotsanangurwa nzvimbo yemutemo wedu uye kazhinji kuita zviitiko, Law & More inokupa iwe nekutsanya sevhisi uye wega nzira yekuwedzera kune ese ari maviri akajeka uye akasarudzika ruzivo rwepamutemo.
UNOFANIRA MURAIRI MUDZIMAI?
Iwe uri muzvinabhizimusi kana wega wega akasangana nedambudziko repamutemo uye ungade kuti rigadziriswe? Ndapota taura Law & More, magweta edu anofara kukubatsira! At Law & More isu tinonzwisisa kuti, kunyangwe iwe uri muzvinabhizimusi kana wega wega, nyaya dzese dzepamutemo dzakawandisa uye kuti chero nyaya iri pamutemo inogona kukanganisa hupenyu hwako. Nekudaro, kusiyana nemakambani mazhinji emutemo, Law & More inokupa chimwe chinhu chakawedzera.
> Hunyanzvi hwe Law & More
> Femu yemutemo muEindhoven
Iko mafemu mazhinji emitemo chete ane ruzivo rweinotsanangurwa nzvimbo yemutemo wedu uye kazhinji kuita zviitiko, Law & More inokupa iwe nekutsanya sevhisi uye wega nzira yekuwedzera kune ese ari maviri akajeka uye akasarudzika ruzivo rwepamutemo. Semuenzaniso, magweta edu inyanzvi mumunda wemutemo wemhuri, mutemo wevashandi, mutemo wemakambani, mutemo wepfuma yenjere uye kutevedzera. Uye kana zvasvika kumakambani, Law & More inoshanda kune vezvemabhizimusi mumatavi akasiyana siyana, senge maindasitiri, zvekufambisa, zvekurima, zvehutano uye zvekutengesa. Uri kutsvaga imwe nzvimbo yemutemo here? Zvino ndokumbira utarise peji redu rehunyanzvi iro nzvimbo dzese dzemutemo dzakanyorwa.
Hunyanzvi hwe Law & More muEindhoven
Zvisinei nemhando yenyaya iri pamutemo, yedu Law & More magweta anokwanisa kukutungamira uye nekukubatsira iwe kubva pakutanga kusvika kumagumo kwechero nzira yepamutemo, vachisimbisa basa ravo pane rakanyatso fungidzirwa, zano repamberi. Kambani yedu yemutemo inopawo kugadzirisa gakava zviri pamutemo nemabasa ekumhan'arira kumakambani nevanhu vakazvimirira uye inoita ongororo dzakaenzana dzemikana nenjodzi pamberi pemaitiro ese emutemo. Uye kana zvasvika pakuitwa kwepamutemo, magweta edu kubva kuEindhoven achakurwirai. Mushure mezvose, isu tinotenda kuti munhu wese anofanira kuwana mukana wekumiririra kodzero dzake. Ndicho chikonzero nei tichishingairira yakanakisa mutengo-mhando chiyero chevatengi vedu, kuti iwe uve nechokwadi chekuti mari yako inozvibhadharira yega. Zvisinei, Law & More inopa kwete kwete chete mabasa epamutemo seye chipangamazano uye wezvekutonga gweta asi zvakare inowanikwa kwauri kwauri semurume anoparadzana
Femu yemutemo muEindhoven
Kupfuurirazve, mukuwedzera kune yedu yakazara ruzivo rweDutch (maitiro) mutemo, isu tine yakawanda yakawanda yepasirese ruzivo. Hofisi yedu haisi yepasi rese chete maererano nehukuru uye mhando yemasevhisi ayo, asiwo maererano nehurefu hwevakuru vekunze uye vekunze vatengi. Kuti tipe vatengi vedu basa rakanakisa, isu tine timu yakazvitsaurira yemagweta emitauro mizhinji uye vatongi, vanoziva mutauro weRussia, pakati pezvimwe zvinhu. Nekudaro, kunyangwe iwe uri wekune imwe kambani yekune imwe nyika kana munhu wepachivande kana iwe ukatarisana nedare repamutemo zvine chekuita kune wekune imwe nyika, iyo Law & More magweta aripo iwe! Iwe unofarira kuziva nezvedu mashandiro nzira uye zvatinogona kukuitira? Ipapo ndokumbira utibate.
Saka, urikutsvaga ruzivo rwehofisi hombe yemakambani? Asi iwe ungadai uchingoda kuve nehukama wega, sehofisi diki yekutengesa? Ipapo Law & More ndiyo Eindhoven gweta remutemo kwauri. Law & More isimba rine simba, rakasiyana-siyana rezvemitemo, riri muScience Park muEindhoven, inonzi zvakare Silicon Valley yeNetherlands iyo inoshanda kune akasiyana vatengi vemuno nevekunze vatengi, makambani, masangano nevanhuwo zvavo. Magweta edu muEindhoven anokupa iwe yakawanda sevhisi kupfuura mamwe mahofisi. Semuenzaniso, hofisi yedu yeEindhoven ine maawa marefu ekuvhura uye isu zvakare takavhurwa manheru uye kupera kwevhiki (Mon / Fri 8.00 - 22.00, Sat / Saka 9.00 - 17.00). Uyezve, isu tajaira kushanda nekukurumidza sezvinobvira, saka haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti tipindure tsamba yako kana usati wave nemumwe wevashandi vedu parunhare.